Barnoota maallaqa malee Online baradhu - Gaachana Sabaa
October 27, 2017 November 2, 2017 Gaachana Sabaabarumsa online
Yeroo waa’ee interneetaa haasoofnu facebook irratti baanee wal arrabsuu fii wal hamachuu hundaa ol ammoo siyaasaan raafamuu asiif achi,bu’aa sagalee uummata Oromoo adduunyaatti dhageessisuuf goonu malee wanti irra guddaan biroo faaydaa kan hin qabnedhaa.
Garuu yoo durba taates dhiira taates interneetiin waan waan gaafatte hundaaf deebii hin dhabu.Suni isa salphaadha,waan akka online dhaan barumsa barachuu yaaddee beektaa? Ani yaadeera,barbaadeen tures akkaataa maallaqa malee waan tokko barachuu danda’u.Irra guddaan isaa maallaqaan tahus asiin gaditti Weebsaayitoota Mata duree barnootaa kumaatamaan lakkaawaman mallaqa malee dhiheessan jiru.Fuula muraasa irratti wanti sibarbaachisu imeeliidhaan akkaawuntii banachuu qofa.
Yoo barbaadde ammo maallaqa xiqqoo baastee waraqaa ragaatiin eebbifamuu dandeessa,yoo hin feene ammoo barattee ogummaa sana ofii keetii itti fayyadamta.Kanaafuu yaa obboleewwan baraaf barumsatu nama kaasaa baradhaa interneeta barachuu fii waan bu’aa gaarii qabuuf malee itti hin fayyadamin.Asiin gaditti weebsayitii muraasa kaaheen jiraa dubbisuu hin dhiisin.
Courser.org’in Weebsaayitii Yunivarsitiilee garaagaraatii fii dhaabbattoota barnoota adda addaatiin waliigaltee godhuudhaan guutuu Adduunyaatiif gargaarsa barnootaa online dhiheessuudhaan beekamu. Courseran mata duree gosa barnootaa hedduu irratti kan hojjetan yoo tahu koorsiin isaan kennan kan yunivarsiiitiilee Adduunyaa guguddaa keessatti kennamaniin kan wal fakkaatudha.
Koorsiileen asirratti kennaman maallaqa malee yeroo tahu barattee yoo waraqaa ragaa barbaadde maallaqa xiqqoo baasuudhaan waraqaa ragaa kee harkatti galfachuu dandeessa,garuu yoo waraqaa ragaa hin barbaanne callistee barachuu dandeessa wanti sibarbaabaachisu imeelii keetiin akkawuntii (account banachuu qofa sana booda yeroo barbaaddetti seenuudhaan sagantaa barnoota keetii mana keetii ykn doormii kee ciistee qo’achuu dandeessa.Barnoota barattuun alas yoo yeroo qabaatte silaaftuu barumsi nama hin ajjeesu.
edx akkuma weebsaayitii asiin olii kana Yunivarsiitiilee guguddaa adduunyaa kanaa waliin wal tahuun sagantaa bal’aa kan kennaidhaa.Yeruma Weebsaayitii kana bantu kam filattee kam akka dhiistu si wallaalchisa sagantaa barnoota gosa hedduu waan dhiheessaniif.Sagantaaleen kennaman kanneen Yunivarsiitiilee keessatti kennamanii fii biroos nii kennu.Yoo qormaata kee irratti qabxii gaarii fidde maallaqa xiqqoodhaan waraqaa ragaa kee fudhattee CV kee baay’ifachuu dandeessa.Sagantaa isaanii akka lamatti kennu bifa Vidiyoo fii barreeffamaatiin dhiyaata.
Weebsayitiin kun akkuma weebsaayitoota asiin olii kana sagantaa barnootaa adda addaa hanga sadarkaa lammaffaa oliitti kan kennan yoo tahu kunis akkuma kaanii maallaqa malee dha.Gosa barnootaa irratti kan hojjatan yeroo tahu gadi fageenyaan barsiisu.Weebsaayitoota baay’ee sagantaa barnootaa kennan keessaa kunis akka gaariitti nama gargaara.
Open culture’n akkuma weebsiyitoota asiin olii kana leekchara kumaatamaan lakkaawaman,Vidiyoo fi waraabbii sagalee (podcast) Yunivarsitoota Adduunyaa garaagaraa irraa kan dhiheessan yeroo tahu.Sagantaaleen (cource) kun Yunivarsitoota biyyoota akka UK ,Australiyaa fi US magaaloota garaagaraa jiran irraa kan walitti qabanidhaa.Kun ammo barnootaaf ykn qo’annaaf barbaacha interneetii irra osoo hin dhama’in waan hedduu bakkuma tokkoo sa’atii osoo hin gubin barachuu dandeessa hunda irraa.
Udemy’n akkuma kanneen asiin olii sagantaa barnoota garaagaraa dhiheessuun beekama garuu kaan irraa wanti adda isa godhu,sagantaa maallaqa malee baratamuu fii maallaqaan baratamu wal keessa makanii oofu.Piroofesaroota fi manneen barnootaa garaagaraa waliin wal tahuun fii weebsaayitoota biraa sagantaa baayyee dhiheessan irraahis bifa salphaa taheen dhiheessu.
Koorsiilee hedduu manneen barnootaa garaagaraa irraa sassaabuun kan dhiheessan yoo tahu gosa barnootaa hedduu ball’inaan kennuu irratti kan fulleeffatanii dha.Academic Earth koorsiilee isaanii mana barnootaatiinii fii gosa barnootaatiin adda baasanii waan kahaniif waan barbaaddu argachuuf baay’ee salphaadha.
Barnoota interneetii Yuniversiitii Stanfordiin keennamu yoo barbaadde bakki isaa Stanford online dha.Corsera’n sagantaa Yuniversiitii kana irraa waan dhiheessuuf koorsii hedduun weebsaayitoota biroo irraa argamu.Koorsiileen muraasni iTune yoo barbaachisan hedduu isaa garuu kompitara kee irratti fixuu dandeessa.Stanford Online koorsiilee baay’ee qulqulluu ta’aniif yeroo nama gargaaran garuu matee duree xiqqaa qabu, yeroo warra asiin olitti kaasneen wal dorgomsiisnu.
Open Yale’n akkuma Stanford sagantaan barnootaa isaan kennan kanuma isaanii qofa yeroo tahu garuu mata duree hedduu waan dhiheessaniif waan feetu keessaa hin dhabdu.Fuulli isaaniis fayyadamuf baay’ee salphaa dha.Wanti namatti tolu Vidiyoolee leekchara kutaatti kennan waraabuun dhiheessu, kun ammo namni dawwannaadhaan irra siif galuuf baay’ee si garaagaraa.
Fuulli kun akkuma warra armaan oliitti sagantaa bareeda kan dhiheessan yoo tahu sagantaa bal’aa sana hin qaban garuu sagantaa dabalataaf tahu fii leekchara garaagaraa,webcastii fi RSS dhaan sagantaalee filatte akka salphaatti hordofuu dandeessa.
Fulli kunis sagantaa barnoota gosaa fi mata duree garaagaraa irratti gadi fageenyaan maallaqa maleen kennu,sagantaa qulqulluu ta’e manneen barnootaa asiin olii kanaan kan wal dorgomsiisuu dandeessu yeroo dhiheessan Leekcharoota fii sagantaa RSS’n raabsuu nii qabu akka salphaan barachuuf.
Fulli kunis mata duree xixiqqoo fii guguddaa garaagaraa walitti makuudhaan irratti yeroo kennan sagantaalee dhiheessaniif gadi fageenyaa barsiisu.sagantaan isaanii gosa barnootaa adda addaa irraa kaasee hanga Afaan nama barachuu fedhuufis nii argama jechuudha.
Fuulli barumsaa kun kan fulleeffatu Weebsayitii irratti yoo tahu akka koodiitti (code) dhimma bahuun danda’amu barsiisu.Fuulli isaanii sagantaa hordofuuf kan baay’ee namatti toludhaa akkasumas yeroo barsiisan ifatti hojiitti hiikaa shaakalaa waan barattuuf akka salphaatti hubachuu dandeessa.
LessonPath fayyadamuun baay’ee salphaadha.Sagantaa gosa garaagaraa vidiyoodhaan dhiheessu.mata dureewwan isaan dhiheessan keessaa akka barbaachisummaa isaatti filattee bakka tokkotti walitti qabdee tarreessuun yeroo deebitee dhuftu maal akka barattu siif salphata.
Memrise fuula barnoota maallaqa malee kennan keessaa tokko.Wanti kana adda godhu gosa barnootaa afaan hedduu dhiheessuun carraa afaan barachuuf filannoo ajaa’ibaati,dabalataan gosa barnootaa biroo irraatis mata duree hedduu barbaachisa nii kennu.yoo dadhabde ammoo achuma irraa tapha taphachuu dandeessa,kanatu adda isaan godha.
Fuulli kun Kuusaa kitaabaa,movie,software,muziiqaa fi wantoota hedduu biroo kan viidiyoos nii argama.Irraa barachuu malee waraqaa raga hin kennan garuu fuulli deddeebitee irraa barachuuf fuula ajaa’ibaati.
← Tedros Adhanom in a middle of controversy
10 peaple shot dead and more than 15 wouded in Oromia Ambo Ethiopia →
One thought on “Barnoota maallaqa malee Online baradhu”
Fayyaa tahi yaaboo!